Eminye Imiyalo Eyisisekelo Yonke I-Newbie Kufanele Ifunde | Kusuka kuLinux
Eminye Imiyalo Eyisisekelo Yonke I-Newbie Kufanele Ifunde
Okuhle | | I-GNU / Linux
Akungabazeki i-terminal iyithuluzi okufanele lisebenzise wonke umsebenzisi we-Linux ngesikhathi esithile, abakhululiwe kuwo. Yize kungelona ithuluzi eliyimpoqo okufanele ulisebenzise, ​​kusaba ukwesaba okukhulu kwabafika kuLinux.
Ngakho-ke ngakho-ke ngabelana ngemiyalo eyisisekelo kakhulu kubasebenzisi ku-terminal nokuthi ungafunda njengokuthile okungeziwe kulwazi lwakho lwe-Linux. Le miyalo iyiqoqo nje lezinto ezivame kakhulu ozokwazi ukuzisebenzisa.
Este ngumyalo obaluleke kakhulu kukho konke, ngoba yonke imiyalo edinga imvume yezimpande idinga lokhu Umyalo weSudo.
Indlela yokusetshenziswa kwayo yilokho kufanele isetshenziswe ngaphambi komyalo ngamunye odinga izimvume zezimpande.
Isibonelo, ukuthola izimvume zomsebenzisi omkhulu:
Lo myalo Kuyisisekelo ngoba yiyona oyisebenzisayo ukushintsha umkhombandlela, ukusetshenziswa kwayo kulula kakhulu. Vele uthayiphe igama lefolda ofuna ukuyifinyelela kusuka enkombeni yakho yamanje.
Isibonelo, ngikwifolda yami yangasese futhi ngifuna ukufinyelela ifolda yami Yokulanda
Uma ngifuna ukubuyela enkombeni eyedlule, ngifaka nje ...
Lo myalo Ixhunywe ku-cd, ngoba ngama-ls ungabhala wonke amafayela namafolda aqukethwe ngaphakathi kwesikhombi lapho ubekwe khona futhi akukhawulelwanga kulokho kepha ungabhala futhi amanye amafolda ngaphandle kokuba ngaphakathi kwawo.
Isibonelo, ngifuna ukubona ukuthi yimaphi amafolda akha ifolda yami ngakho-ke ngibhala nje
Futhi ngizothola uhlu ngaphakathi kwesikhombi lapho ngitholakala khona:
Manje uma ngifuna ukubona ukuthi yini engaphakathi kwezinye izinkomba, ngokwesibonelo, yini engaphakathi kwefolda yami yemibhalo futhi ngiyazi ukuthi kukhona ifolda ebizwa ngephrojekthi futhi ngifuna ukubona okuqukethwe kwayo:
Ngalo myalo sinethuba lokudala izinkomba kungaba enkombeni lapho sibekwe khona noma kokunye kufanele sichaze indlela.
Isibonelo, ngifuna ukudala ifolda enegama 1 nenye engaphakathi kwayo enegama 2
Ifana neyangaphambilini kuphela lokhu kusivumela ukuthi sakhe ifayili elingenaluthoNgendlela efanayo, lokhu kwenziwa enkombeni yamanje noma endleleni esiyibonisayo.
Isibonelo, ngifuna ukudala ifayela lombhalo:
Ukukopisha nokunamathisela kungumsebenzi obalulekile okufanele siwenze ukuhlela amafayela ethu. Usebenzisa i-cp kuzokusiza ukukopisha nokunamathisela ifayela kusuka ku-terminal. Okokuqala, kufanele sinqume ifayela esifuna ukulikopisha bese sifaka indawo okuyiwa kuyo ukuze unamathisele ifayela.
Lapha kubalulekile ukukhombisa ukuthi yiliphi ifayela noma ifolda ezokopishwa kanye nendlela lapho ikhophi izobekwa khona.
cp origen destino
Este kungumyalo wokususa amafayela nezinkomba. Ungasebenzisa -f uma ifayili lidinga imvume yezimpande ukuthi lisuswe. Futhi ungasebenzisa -r ukwenza okuphindwayo ukususa ukususa ifolda yakho.
Kubalulekile, kubaluleke kakhulu ukubhekisisa ukusetshenziswa kwalo myalo ngoba njengoba ungachaza imizila, ungakwazi ukususa amafolda abalulekile kusistimu yakho.
Njengomsebenzisi, imvamisa udinga ukubona umbhalo noma ikhodi yeskripthi sakho. Yebo, lo myalo we-Linux oyisisekelo uzokukhombisa umbhalo ngaphakathi kwefayela lawo. Lo myalo uhambisana nama-ls njengoba ungabheka ukuthi amafayela owafakwa kuhlu ngama-ls aqukethe ini.
Isibonelo, ngifuna ukubona ukuthi ifayili leLists.txt liqukethe ini
Futhi umyalo wokugcina kungenxa yokuvalwa kohlelo. Kwesinye isikhathi badinga ukunqamula ngqo esigungwini sabo. Lo myalo uzokwenza umsebenzi wesikole.
Ngaphandle kokunye ukwengeza ungazi umyalo ngamunye nemingcele engakusiza ukuthi uthuthukise ukusetshenziswa kwalowo nalowo, simane sengeze –usize kulokhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Eminye Imiyalo Eyisisekelo Yonke I-Newbie Kufanele Ifunde
Ngombono wami othobekile, umyalo we-MAN ubaluleke kakhulu kune-SUDO ngoba yize singenayo i-intanethi, okungenani singayazi imanuwali yemiyalo nemibhalo yohlelo ezosiza kakhulu ukuze sikwazi ukuyisebenzisa.
Faka iGoogle Earth ku-Ubuntu 18.04 nakokunye okuphuma kukho
Umhlahlandlela Wokufaka weXubuntu 18.04 LTS